ठेकेदारको चरम लापर्वाहीले गोरखा दरबार बनेन (अहिलेको अवस्था यस्तो छ, हेर्नुहोस् फोटोहरु) | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
ठेकेदारको चरम लापर्वाहीले गोरखा दरबार बनेन (अहिलेको अवस्था यस्तो छ, हेर्नुहोस् फोटोहरु)
गोरखाको इतिहास झल्काउने पु्रातात्विक, ऐतिहासिक गोरखा दरबार पुन निर्माण निर्माण ब्यवशायीका कारण ढिलाई भएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
पचली सिवाको जेभी कन्स्ट्रक्सनले २०७४ कात्तिकमा २४ महिना भित्रै दरबार निर्माण गर्ने सम्झौता पुरातत्व बिभाग सँग गरेको थियो ।
पहिलो पटक भएको सम्झौता भित्र निर्माण पुरा नभएपछि छ महिना म्याद थप भयो । मंसिर मसान्त भित्र दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएपछि अहिले म्याद थप भएको छैन । चार करोड ३७ लाख भईरहेको पुन निर्माणको काम प्रति सर्वसाधारण, सरोकारावाला, भक्तजन सबै असन्तुष्ट छन ।
कोभिड १९ को प्रभाव नभएको भए अहिले शैक्षिक भ्रमणको मूख्य सिजन थियो । नेपालको इतिहास बुझ्न, हेर्न दैनिक हजारौँ विद्यार्थी गोरखा आउँथे । पुरानो कला कौशल, शाहबंसको इतिहास, गोरखाको धार्मीक साँस्कृतीक परम्परा झल्कने गरी निर्माण भएको गोरखा दरबार तत्काली राजा राम शाहाको कार्यकालमा निर्माण भएको मानिन्छ । दरबारमा कलात्मक शैलीका झ्याल ढोका प्रयोग भएका छन् ।
अहिले गोरखा दरबारको दोस्रो तला निर्माणको काम भईरहेको छ । दरबारमा पुराना झ्याल ढोका प्रयोग भएका छन् । नयाँ र पुराना काठ बिच तालमेल नमिल्दा पहिले भन्दा सुन्दरतामा कमि देखिन्छन् ।
गोरखा दरबार पुन निर्माण अलपत्र छ । भुकम्पमा भत्किएको दरबार अहिले सम्म बनेको छैन । ऐतिहासिक धार्मीक धरोहर निर्माणमा ढिलाई गर्ने ब्यवशायीलाई कारवाही भएको छैन । ठेकेदारले झनै काम ढिलो गरेका छन् । गोरखा दरबार बनेको छैन अरे भन्ने हल्लाले भक्तजन, पर्यटक आउने क्रम घटेको स्थानीइ मिलन राना मगर बताउँछन् । जसका कारण स्थानीयको होटल ब्यवशाय, फुलप्रसाद ब्यापार, गोरखाको प्रचार प्रसार समेत राम्रो हुन सकेको छैन । सिङ्गो जिल्लाको पहिचान गोरखा दरबार पुन निर्माण ढिलो हुँदा सरोकारवाला सबैले चासो दिनुपथ्र्यो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । ठेकेदारको चरम लापर्वाहीले दरबार अलपत्र रहेको गुनासो उनले गरे ।
‘हामी आफ्नो दुःख पिडा बिसाउन मठ मन्दिर, दरबार आउँछौँ । भगवानलाई पुकार्छौँ । तर गोरखकाली मन्दिर आउँदा यहाँ आएर हेर्दा आफ्नो पिडा भुल्नु भन्दा झनै पिडा थपियो’ मन्दिर परिसरमा भेटिएका भक्तजन वुद्धी जोगीले भने । यहाँको पुन निर्माण सुस्त छ । धेरै पहिले देखि दरबार पुन निर्माण पुरा नहुँदा वरपर निर्माण सामग्री यत्रतत्र छरिएका अलपत्र छन् । हिड्न पनि समस्या छ । यसरी काम नगर्नेलाई सबै पक्षले दबाव दिने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो भने काम छिटो हुन्थ्यो कि !
‘हामीले दरबार पुन निर्माणमा ढिलाई गरेको प्रति पटक पटक गुनासो ग¥यौँ । स्थानीयले वडामा, नगरपालिकामा पनि धेरै गुनासो गर्नुभयो । पुन निर्माणको काम पुरातत्व बिभागबाट सोझै भएकाले ब्यवशायीलाई हाम्रो तर्फबाट प्रेसर दिन सकिएन’ गोरखा नगरपालिका ६ का वडा सदस्य आनन्द गुरुङले भने । ठुला निर्माण ब्यवशायीलाई राजनीतिक दलको संरक्षण हुने रहेछ । कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोले कारवाही पनि नहुने रहेछ । जति पटक पनि म्याद थप्न पाईने कस्तो नियम ? त्यही कारण आज गोरखा दरबार पुन निर्माण हुन ढिलो भईरहेको छ ।
निर्माण ब्यवशायी उदासिन हुँदा गोरखा दरबार पुन निर्माणमा ढिलाई भएको छ । अहिले करिब ६५ प्रतिशत काम सकियो । पुरातत्व बिभागले दोस्रो पटक थपेको समय पनि सकियो । ‘पुन म्याद थप गर्ने वा निर्माण ब्यवशायीलाई कारवाही गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन’ गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरी भुसालले भने । तर काम भईरहेको छ । दु्रत गतीमा काम भयो भने तीन महिना भित्र पुरा हुन्छ । यस अघि जस्तै ढिलाई हुने हो भने कहिले दरबार पुन निर्माण हुन्छ भन्न सकिन्न ।
जगमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि छ महिना थप समय लाग्यो । त्यसयता निर्माण ब्यवशायीकै कारण मात्र ढिलाई भएको छ । हामीले पटक–पटक ताकेता गरेको उनले बताए ।
अहिले छ जना काठको काम गर्नेहरु छन् । बिचमा काठको समस्याले कामले गती लिन सकेन । पुस मसान्त सम्म दोस्रो तलाको गाह«ो लगाउन थाल्छौँ । चैत सम्म सक्ने लक्ष्य रहेको निर्माण कम्पनीका ओभरसियर अक्सर अलि मियाँले बताए । दोस्रो तलाको पाखा दलिन राख्ने काम भईरहेको छ । अब काम धेरै छैन । अन्य पुन निर्माण जस्तौ छिटो र सहज नहुने रहेछ । म पनि नयाँ आएकाले पहिलेका विषयमा अनविज्ञ छु ।